IKdenlive 20.12 ifika nokuthuthuka ekwakhiweni kwemiphumela, imibhalo engezansi nokuningi | Kusuka kuLinux
IKdenlive 20.12 ifika nokuthuthuka ekwakhiweni kwemiphumela, imibhalo engezansi nokuningi
Abathuthukisi bephrojekthi ye-KDE sebekhiphe ukukhishwa kwesihleli sevidiyo seKdenlive 20.12, ebekelwe ukusetshenziswa okungaconsi phansi, isekela ukusebenza ngokuqoshwa kwamavidiyo kuma-DV, HDV namafomethi we-AVCHD, futhi inikeze yonke imisebenzi eyisisekelo yokuhlela ividiyo, ngokwesibonelo, ikuvumela ukuthi uhlanganise ividiyo, umsindo nezithombe ngezikhathi usebenzisa umugqa wesikhathi futhi futhi zisebenza imiphumela eminingi.
Kulabo abangazi Kdenlive, kufanele ukwazi lokho lokhu ngumhleli wevidiyo wamahhala ovulekile omangalisayo ye-GNU / Linux neFreeBSD futhi ithembela kwamanye amaphrojekthi womthombo ovulekile njenge-FFmpeg, uhlaka lwevidiyo ye-MLT, kanye nemiphumela ye-frei0r.
Njengoba kushiwo ngenhla, iKdenlive yakhela ohlakeni lwevidiyo ye-MLT kanye ne-ffmpeg, ezinikeza izici eziyingqayizivele zokuxuba cishe noma yiluphi uhlobo lwemidiya.
1 Izindaba eziyinhloko zeKdenlive 20.12
2 Ungayifaka kanjani iKdenlive 20.12 ku-Linux?
2.1 Ukufaka kusuka ku-PPA (Ubuntu kanye nokuphuma kokunye)
2.2 Ukufaka kusuka ku-AppImage
Izindaba eziyinhloko zeKdenlive 20.12
Kule nguqulo entsha kugqanyisiwe lokho ingeze ukusebenza kokushintshela kuthrekhi efanayo ukuze kube lula ukwenziwa komphumela inguquko yezinhlayiya. Esikhundleni sokulungisa izindawo ezigqagqene kwiziqeshana ezimbili, isici esisha sikuvumela ukuthi usethe ubude besikhathi senguquko bese ukhetha iphoyinti lokunquma elinquma ukuphakama kwenguquko lapho ushintsha isiqeshana esisodwa ufake esinye.
Ithuluzi elisha lihlongozwa ukwengeza nokuhlela imibhalo engezansi, kuhlanganiswe nomugqa wesikhathi futhi kwasetshenziswa ngendlela yethrekhi ekhethekile newijethi entsha, kanye Isekela ukungeniswa kwemibhalo engezansi ngefomethi ye-SRT / ASS nokuthekelisa ngefomethi ye-SRT. Ukushintsha isitayela nombala wombhalo, ungasebenzisa amathegi we-HTML.
Yonke imiphumela iqoqelwe kwisigaba sesigaba esinemininingwane eminingi. Yonke imiphumela nemingcele yayo ibuyekeziwe. Imisindo ekhona manje iboniswa ngokuya ngokuhambisana nokusebenza kwayo okuhambisanayo ohlelweni lokusebenza lwamanje. Imiphumela ephukile nenenkinga ihanjiswe esigabeni esehlukile semiphumela eyehlisiwe elinde ukususwa ekukhishweni okuzayo.
Kubalulwe futhi nokuthi ssisebenzise imiphumela emisha:
Insika Echo yokugcwalisa izindawo eziseceleni kumavidiyo amile ngephethini efiphele
I-VR 360 ne-3D ukuze zisebenze ngozimele be-stereoscopic kanye nontathu
Isilinganisi sevidiyo ukulungisa ukugqama, ukungafani, ukugcwala kanye ne-hue
Umphumela wokutshala ngokugcwalisa unamandla okudlulela kuzitayela ezingukhiye.
Kwezinye izinguquko ezigqamile:
Kungezwe amandla wokuqamba kabusha imiphumela yangokwezifiso bese wengeza / hlela izincazelo kubo.
Umsebenzi wenziwe ukwenza ngcono ukusetshenziswa komugqa wesikhathi nokwandisa ukuphendula kwesixhumi esibonakalayo. Iziqeshana kumugqa wesikhathi manje sezishintsha umbala ngokususelwa kumathegi anamathiselwe kuphaneli yephrojekthi.
Kungezwe ikhono lokulawula ukufakwa kokujwayelekile komsindo kusihloko sethrekhi.
Kungezwe usekelo lokususa amathrekhi amaningi ngasikhathi sinye.
Engxoxweni yokwakha ingobo yomlando yephrojekthi, inketho yokufaka kungobo yomlando kuphela iziqeshana ezikhona kumugqa wesikhathi yasetshenziswa, kanye nenketho yokukhetha ifomethi ye-TAR noma ye-ZIP.
Ithuluzi lezinsizakusebenza eliku-inthanethi lifakwe kwi-qtwebengine futhi latshintshelwa ekulayisheni kwezinsiza ngaphezulu kwe-HTTPS ngokuzenzakalela.
Ungayifaka kanjani iKdenlive 20.12 ku-Linux?
Okwalabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka le nguqulo entsha, Kufanele ulandele imiyalo esabelana ngayo nawe ngezansi.
Ukufakwa Ungakwenza ngokuvula i-terminal bese wenza umyalo olandelayo kuyo:
Ukufaka kusuka ku-PPA (Ubuntu kanye nokuphuma kokunye)
Enye indlela yokufaka lolu hlelo kusistimu yakho ngosizo lokugcina. Ngakho-ke le ndlela isebenza ku-Ubuntu nakwizakhi zayo.
Ku-terminal bazokhipha imiyalo elandelayo:
Manje bazovuselela amaphakheji abo nohlu lwama-repositories nge:
Ekugcineni bazofaka uhlelo lokusebenza ngokwenza umyalo olandelayo ku-terminal:
Ukufaka kusuka ku-AppImage
Ekugcineni indlela yokugcina yanoma ikuphi ukusatshalaliswa kweLinux yamanje ukulanda iphakethe le-AppImage.
Ku-terminal sizokhipha umyalo olandelayo:
Sinikeza izimvume zokubulawa nge:
sudo chmod +x kdenlive-20.12.0-x86_64.appimage
Futhi ekugcineni ungaqhuba uhlelo lwakho lokusebenza ngokuchofoza kabili kuso noma kusuka ku-terminal nge:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » IKdenlive 20.12 ifika nokuthuthuka ekwakhiweni kwemiphumela, imibhalo engezansi nokuningi
I-FFmpeg: Isibuyekezo Esifushane Sokugubha Iminyaka Yakho Yamuva Yama-20 eLinux
Ukuqhekeka kweSolarWinds kungaba kubi kakhulu kunalokho obekulindelwe